Kedu otu ọsọ si eme mgbanwe ntụgharị | Martech Zone
Gịnị ma ọ bụrụ na i nwere ike mmụba ntụgharị site na 391% site na igbanwe otu ihe banyere ahia gi? Leads360 achọtala ụzọ iji mee nke ahụSite na mbenata oge ntụgharị ọ ga - ewe onye ahịa gị ịkpọtụrụ atụmanya ahụ. Ngwa ọrụ inye aka na-ebugharị ọnụego ntụgharị site n'ịhụ na usoro dị n'ọnọdụ ịkpọtụrụ ma mechie atụmanya gị mgbe ha dị njikere ịzụrụ!
Nke a bụ infographic: Usoro ire ahịa nke na-eme ka mgbanwe gbanwee
Nweta nsonaazụ zuru ezu na data itinye n'ọrụ gị, budata akwụkwọ nkwado a, Strategy Kọntaktị kachasị: Otu esi eji ekwentị na Email eme ihe kacha mma maka kọntaktị na mgbanwe ịga nke ọma.
Tags: mgbanweemailọpụpụ ahịaekwentịNkwado ire ahịa